रामकुमारी झाँक्रीलाई के भयो ? वीर अस्पताल भर्ना – Sandesh Press
रामकुमारी झाँक्रीलाई के भयो ? वीर अस्पताल भर्ना
October 28, 2021 315
काठमाडौ । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री अचानक अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएकी छन्। उनलाई अचानक उच्च ज्वरो आएपछि भर्ना गरिएको हो ।
मौसमी ज्वरोका कारण मन्त्री झाँक्री वीर अस्पताल भर्ना भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । बुधबार राती झाँक्री अस्पताल भर्ना भएको उनको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार दौडधुप धेरै भएको र आरामसमेत गर्नु परेकाले उनी अस्पताल भर्ना भएकी हुन्।
मन्त्री झाँक्रीलाई ज्वरो र निमोनियाको सामान्य लक्षण देखिएपछि बुधबार बेलुका वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री झाँक्रीको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको र रिपोर्टहरू आउन बाँकी रहेकाले सम्पूर्ण भेटघाट समेत बन्द गरिएको उनका सहयोगी युवराज गिरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।काठमाडौ । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री अचानक अस्वस्थ भई अस्पताल भर्ना भएकी छन्। उनलाई अचानक उच्च ज्वरो आएपछि भर्ना गरिएको हो ।
फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्ग र उनकी श्रीमती प्रिसिला चानविरुद्ध आफ्नै घरमा काम गर्ने दुई पूर्व कर्मचारीले मु द्दा दायर गरेका छन् । दुबै पूर्व कर्मचारी मिया किंग र जोन डोले लियाम बुथका मार्क जुकरबर्गको गृह सुरक्षा इन्चार्जमा काम गरे।
Prevमहाकालीमा डुङ्गा पल्टियो : एकको मृत्यु, एक बेपत्ता
Nextएलिजा गौतमले किनिन् आधा करोडको कार,आमाले दिइन उपहार,ऋषि धमलालाइ किन यस्तो भनिन? (भिडियो सहित)